सारालाई निखिल फापेनन्, सलोन के होलान् ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsसारालाई निखिल फापेनन्, सलोन के होलान् ?
सुत्र इन्टरटेन्मेन्ट- सारा सिर्पाली नेपाली फिल्मका लागि भाग्यमानी बन्न खोजेर पनि नबनेकी हिरोइन् हुन् । किनकी, उनले जुन सिनेमाबाट फिल्म क्षेत्रमा डेब्यू गरिन् त्यो नेपाली फिल्मका सुपरस्टार अभिनेता निखिल उप्रेतीसँग थियो । निखिलसँग फिल्ममा डेब्यू गरेर हिट हुने अभिनेत्रीको चाहना हुन्छ । साराको पनि सायद त्यही चाहना नै थियो होला ।
तर, उनै निखिलसँग २ वटा सिनेमामा काम गरेपछि सारालाई हिट हुन अझै पर्खनुपर्ने अवस्था छ । तेश्रो सिनेमा सुश्री सम्पत्तीसम्म आउँदा सारालाई अझै पनि हिटको ट्याग पर्खनुपर्ने अवस्था छ । यो सिनेमाले आफूलाई हिट बनाउने अपेक्षा उनको छ ।
सारालाई रुद्र सिनेमाबाट डेब्यू गरेर फाइदा भएन । उनी अहिले आएर आफूले गरेको डेब्यू ठिक थियो भन्ने सोच्दिनन् । किनकी, यो फिल्मबाट उनले जुन खालको माइलेज पाउनुपर्ने थियो पाइनन् ।
यसैले पनि सारा मंसिर २८ गतेबाट रिलिज हुने तयारीमा रहेको सुश्री सम्पत्ती फिल्मबाट ज्यादै आशावादी छिन् । यो फिल्ममा साराको जोडीमा अभिनेता सलोन बस्नेत छन् । सलोन बस्नेतसँग जोडिएर साराको हिट हुने अपेक्षा छ ।
सारा आफूलाई राम्रो ब्यानर, राम्रो हिरो र राम्रो कथा चाहिएको बताउँछिन् । किनकी, उनको जुन खालको सोच र अभिलाषा छ त्यो पुरा हुनका लागि यी तिन कुरा आवश्यक छ ।
सारा सिर्पालीका अनुसार सुश्री सम्पत्ती हसाँउने सिनेमा मात्र पनि होइन । यो सिनेमाले दर्शकलाई मिठो सन्देश र थोरै भावूक पनि बनाउनेछ । यसैले पनि सिनेमा हिट हुने विश्वास उनको छ ।
नेपाली फिल्ममा आएसँगै साराको सुन्दरताको चर्चा चलेको छ । यो सुन्दरताको चर्चाले मात्र सारालाई पुग्दैन । उनलाई सिनेमा वृत्तमा हिट पनि हुन जरुरी छ । यसका लागि उनलाई सुश्री सम्पत्ती चल्नुपर्ने हुन्छ ।
निखिलसँग हिट नभएकी सारा सलोनसँग हिट हुन्छिन् कि के ? मंसिर २८ को पहिलो शोपछि थाहा हुनेछ ।